Sarivongana bitika nataon'i Jedediah Corwyn Voltz namboarina manodidina ny trano hazo | Famoronana an-tserasera
Mpanakanto monina ao Los Angeles (Jedediah Corwyn Voltz) manorina trano hazo kely nofonosina tanimbary na hazo bonsai mahazatra amin'ny andiany sary sokitra vaovao mitondra ny lohateny 'Som bitika' na rehefa mitondra anaram-boninahitra amin'ny teny anglisy izy 'Som bitika'. Voltz dia niasa nandritra ny folo taona mahery ho an'ny horonantsary sy tetikasa hafa hanamboarana ny firafitra tsirairay avy amin'ny rangotra miaraka amin'ny tapa-kazo kely, lamba landy, zavakanto bitika ary vato sarobidy izay miafina amin'ny toerana tsy takatry ny saina.
Hatramin'izao dia namokatra toeram-ponenana kely manodidina ny 25 izay mitovy amin'ny tena fananganana, avy amin'ny tilikambo fiambenana kely ao ala mitokana, windmills na ny kodiarana rano lehibe. Ireo sanganasa hita eto dia ho hita eo amin'ny 'Virgil mahazatra'any Los Angeles avy amin'ity April 23.
Jedediah Corwyn Voltz natokana hamoronana sary hosodoko, ary sary avy amin'ny studio ao Silverlake, California. Ny asany dia voataonan'ireo ho avy mifandimby sy ireo univers mifanila. Avy eo avelanay galeri-tsary miaraka amin'ny sanganasany ianao, tsy maintsy manana eritreritra, fotoana ary famoronana ianao.
Jedediah Corwyn Voltz Toa voahodidin'ny zavamaniry sy sary sokitra efa tapitra foana izy, tao anatin'ireo andiany farany natolony Trano hazo kely manodidina ny zava-maniry mahavokatra sy cacti.
Mamorona trano hampiatoana ny fivezivezena aho, hoy i voltz. Hitako fa nanamboatra fanamboarana kely avy amin'ireo hazo na zavamaniry ireo aho nandritra ny fotoana tsy nahitako tena. Tamin'ny taon-dasa dia nanangana trano hazo voalohany aho, nanomboka tamin'izay dia efa nahatratra 25 izy ireo. Ho fanampin'izany dia nanangana tilikambo fiambenana kely any anaty ala mitokana aho, lampihazo ao amin'ny tampon-trano mba hanomezana fahatsapana fisaintsainana, ary valopy fitotoana rivotra sy kodia rano.
Fuente [afisy lehibe]
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Sary sokitra bitika nataon'i Jedediah Corwyn Voltz miorina manodidina ny trano hazo